Benito Olmo. Kubvunzana nemunyori weEl gran rojo | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Facebook yaBenito Olmo.
Benito Olmo (Cádiz, 1980) parizvino iri kuburitsa bhuku idzva. Yayo yakanzi Iyo huru tsvuku uye anovimbisa kuramba akatendeka kana kuwedzera iro ratove rakakura huwandu hwevaverengi iro iro munyori weCadiz uye screenwriter anaro. Ndiye zvakare munyori we Zvinhu churu zvandisina kukuudza ndisati ndakurasa, Nhamo yeZuva o Turtle inofambisa, iyo zvakare ichave neyekugadzirisa firimu. Akave ari wekupedzisira pamitambo yakawanda yekunyora yakadai seyekutanga mubayiro weruzivo La Trama / Aragón Negro kana iyo XNUMXrd Santa Cruz Prize.
Akandipa izvi indavhiyu kwaanotiudza nezvenyaya iyi nyowani, zvakare nezvevanyori vaanofarira uye mabhuku uye chiitiko chekutsikisa chatinacho. Ndinoonga chaizvo nguva yawakapedza uye mutsa wako.
Benito Olmo - Bvunzurudzo
BENITO OLMO: Ndakatanga kuverenga ndichiri mudiki, sezvo ndaive nerombo rakanaka kuwana raibhurari hombe uye yakaguta zvakanaka pamba. Iniwo ndakatora kutaura nyaya, kunyanya muchimiro chemakomiki, ndisati ndasvetuka kuti ndinyore.
BO: Ndakafadzwa kwazvo naStephen King zvinyorwa. Chaizvoizvo chakavadya. Zvisinei, kuvhunduka chaiko kwakauya pandakawira mumaoko angu Matikitivha ese anonzi FlanaganNaAndreu Martín naJaume Ribera. Ndingati iri ndiro bhuku rakasimbisa rudo rwangu rwekuverenga.
BO: Ndinosarudza Andreu Martin, nekuti iye ndiye mhando yemunyori wandinoda kuve akafanana: akatendeka, anoshanda nesimba uye ane hunyanzvi.
BO: Ndingadai ndakada kusangana Sherlock Holmes uye ona kana mukurumbira wake wakanzi wakarurama.
BO: Zvese zviri zviviri, haugone kupotsa kofi.
BO: Ndinonyora mangwanani, mangwanani-ngwanani. Inguva yangu yekusika yezuva, apo ini ndisingafunge nezve chero chinhu kunze kwenyaya iripedyo. Ndine hofisi yakanaka, yakanyarara kwandinonzwa kunge ndiri mupendi yeHopper.
AL: Chii chatinowana mune yako nyowani nyowani, Huru Dzvuku?
BO: Nyaya yematsotsi inotarisa a Cadiz mutikitivha uye wechidiki weTurkey izvo zvinotiratidza matumbu eguta re muFrankfurt.
BO: Pasina kuve yemhando yemhando mukati mawo, futi Ini ndinonyora ma audioseries eNhautel. Ndiri kufara nezve fomati iyi, sezvo ichindibvumidza kuti ndiwedzere uye ndiunze zviwanikwa zvinowedzera kuverenga. Yangu yazvino odhiyo nhepfenyuro inonzi Wonderland.
BO: Handidi kutaura nezve zvandiri kunyora. Ini ndoda kuzviita kana zvapera. Nezve kuverenga, ini ndichangopedza Varume vane jeko, naJohn Connolly, uye ini ndatanga Izvo zvisikwa zvisikwanaGuillermo del Toro.
BHUKU: Nyika inodhinda haina vashanduri vakanaka vanokwanisa kuona mabasa akanaka nekuatsikisa mumamiriro ezvinhu akanakisa. Sokutaura kwakaita Mario Muchnik, vaparidzi vari kutsiviwa nemaakaunzi. Mazuva ano, huwandu hwevateveri vauinahwo pamasocial network hunokosha kupfuura kugona kwako kunyora. Neraki, vaverengi vachiri neshoko rekupedzisira.
BO: Ndinoedza kuti ndisabatwe, kunyange zvisiri nyore zvachose. Uye ini handidi kuverenga nyaya dzakaiswa mudenda, ndoda kuzvinyora. Chii kuda es musiyei shure yenguva yekutuka uye kuti isu tinogona kupora kutsvoda kwese nekumbundira izvo hutachiona hwatibira isu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Benito Olmo. Kubvunzana nemunyori weThe Big Red